လိုအပ်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ . ifile.it နဲ့ mediafire ကနေ တင်ထားပေးပါတယ် .
Posted by ညီနေမင်း at 2:03 AM No comments:
Download ကို အောက်မှာ နှစ်နေရာကနေ တင်ထား ပေးပါတယ် . အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကသာ Download လုပ်ကြပါ . ဒါကတော့ ၀ဘ်ဆိုက်တွေ ပြင်နေတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့ တစ်ခြား တစ်စုံ တစ်ရာပြင်ဆင်မှု ပြုတဲ့အချိန်မှာ သုံးတဲ့ သင်္ကေတတွေပါ .
Labels: graphic icons
Posted by ညီနေမင်း at 1:59 AM No comments:
ဒီနေ့တော့ icon တွေကိုပဲ တင်ပေးလိုက်တယ် . brush တွေကိုလဲ တင်ပေးဖို့ရှိသေးတယ် . တစ်ကယ့်ကို အကောင်းဆုံး brush တွေကို စုထားတယ် . 2009 ခုနှစ် ထွက်သမျှ brush တွေကို . အခုတော့ icon လေးတွေကို Download လုပ်လိုက်ပါဦး .
လာပြန်ပြီလို့ မလုပ်နဲ့ဦး . ဒါက အရင် icon နဲ့မတူဘူး . 3D icon တွေ . 3D ပုံစံကြိုက်သူများအတွက် . သဘောကျတယ်ဆိုရင် ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ .
Posted by ညီနေမင်း at 12:34 AM 1 comment:
ကဲ ဒါကတော့ loading time ကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာ ဒီတိုင်း ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတာ ထက်စာရင် animation ပုံစံလေးနဲ့ဆိုတော့ စောင့်ရတာ စိတ်သက်သာတာပေါ့ . အဲ့လို loading ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် တင်ထားပေးပါတယ် . တစ်ကယ့်ကို special animation တွေပါပဲ .
Posted by ညီနေမင်း at 12:23 AM No comments:
ဘယ်နေရာမှာ သုံးတယ်ဆိုတာတော့ ပြောဖို့ကို မလိုတော့ဘူးလို့ ထင်တာပဲ . လိုတယ်ဆိုလဲ ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ် . ဘလောဂ်ရဲ့ မြှားတွေ၊ နဲ့ တစ်ခြား ဒီဇိုင်းတွေမှာ ပုံလှလှလေးတွေ ထည့်ချင်တယ် ဆိုရင် အစားထိုးထည့်လို့ရအောင် အဆင်သင့်လုပ်ထားပြီးသား လက်ရွေးစင် icon တွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ဘလောဂ်ကို အတော်အသင့် နားလည်တဲ့သူတွေ၊ photoshop ကို အသုံးပြုတတ်တဲ့ သူတွေဆိုရင်တော့ icon ကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးရတယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလိုလောက်ပါဘူး . အခုဒီထဲမှာ .ico နဲ့ .png နှစ်ခုစလုံး ပေါင်းထည့်ထားတယ် .
Posted by ညီနေမင်း at 12:09 AM No comments: